घरमा लोडसेडिङ भयो भने ‘कुलमान गयो’ भनेर लेख्नेहरू आजभोलि कतातिर गए ? त्यो खोजमूलक विषय नै बनेको छ । दिनमा १६ देखि २२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको समयमा प्राविधिक कारणवश झिमिक्क बत्ती निभ्दा ‘ल ल ल, अहो ! कुलमान नै गयो’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा खिसिटिउरी गर्नेहरू धेरै थिए ।
आज पनि तिनीहरू यो भूमिमै होलान् भन्ने पूर्ण विश्वास छ । दीपावली पनि राम्रैसँग मनाए होलान् । लक्ष्मीपूजा पनि धुमधामसँगै गरे होलान् । यो वर्षातको समय भएकाले बिजुली आएको हो, कुलमानले केही नाप्या छैनन्, यिनको पाइन हिउँदमा पानी सुक्दा हेरम्ला नि भन्नेहरूले आफ्नो घर झिलिमिली बनाए होलान् ।
एउटा यस्तो कालखण्ड थियो, मैनबत्ती बालेर विद्यार्थीहरू एसएसलीको तयारी गर्दै थिए । उनी भोीिका कर्णधार थिए । भोलिका कर्णधारहरू अँध्यारोमा भविष्यका शब्दहरू खोज्दैथिए, पढ्दैथिए । दीपावली र लक्ष्मीपूजा पनि मैनबत्ती बालेर नै गरिन्थ्यो अक्सर । यस्तो लाग्थ्यो कि मैनबत्तीका फुटकर व्यापारीहरू यस देशका बिजुलीका मालिक हुन् । म मैनबत्ती व्यापारीहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
कोठाको भित्तामा लोडसेडिङको तालिका टाँसिन्थ्यो । बिजुली आयो भनेर बच्चाहरूले ताली पिट्दा, कराउँदा यस्तो लाग्थ्यो कि हामी भर्खरै दोस्रो विश्वयुद्ध जितेर घर फर्किएका छौं र हामीलाई देखेर हाम्रा केटाकेटी चरम खुशीले बुरुकबुरुक उफ्रिएका छन् । बाबाठाकुरे, त्यस्तो पनि विकराल जुग थियो । खाना खाँदाखाँदै बिजुली जान्थ्यो । अनि भात कता छ, सब्जी कता छ, प्याज कता छ, दाल कता छ, साग र मासु कता छ थाहा नै हुन्नथ्यो । हुन त ती थालमै हुन्थे ।
तर मैले एकजना मित्रलाई अब कुलमान आए, केही हुन्छ, यथास्थिति रहन्न भनेर चियापसलमा कन्भिन्स गरेको थिएँ । चियापसल न हो, भएका कुरा नि हुन्छन्, नभएका कुरा नि हुन्छन् । तर मेरो चैं भएका कुरा थियो, हुने कुरा थियो । तर त्यो दिन ती मित्र झोंक्किएर मलाई कुट्न आउलान् जस्तो गरेर एकदम बाघ जस्तो गर्जिंदै घोषणा गरे, ‘यो कुलमानले केही लछारपाटो लगाएछ भने म नाक काटेर फालिदिन्छु ।’
चियागफमा दुश्मनी कमाएका ती मित्रले दीपावलीको दिन आफ्नो झिलिमिली घरको फोटो मलाई मेसेन्जरमा पठाउन भ्याए । र ‘ह्याप्पी दीपावली, मित्र’ भनेर शुभकामना सन्देश पनि दिए । तर मैले उसलाई ‘तिमीले नाक काट्यौ कि काटेनौ’ भनेर सोधिनँ । तिनको घरको झिलिमिलीको सजावाट यति सुन्दर थियो मानौं कि कुनै अरबी शेखको मुकाम जस्तो । त्यस मुकामभित्र बिल्ली डान्सका नर्तकीहरू आफ्नो सेक्सी कला देखाउनका लागि आतुर भएजस्तो ।
हातमा सेतो कागजको टुक्रामा केके कुरा केरमेर गरेका थिए थाहा भएन । तर त्यो कागजको टुक्रालाई बारम्बार नियाल्दै कलमले लेखिएका लाइनहरूलाई थपघट गर्दै थापाथलीतिर लखरलखर पैदल यात्रामा हिडिँरहेका थिए – कुलमान घिसिङ । कुलमान घिसिङ अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ । यो दृश्य दीपावली आउनुभन्दाको ठीक दुईदिन अगाडिको कुरा हो । संयोगले त्यसदिन म पनि थापाथलीतिरै लखरलखर डुलिरहेको थिएँ । हामी दोबाटोमा भेटियौं ।
हाकिमहरू निर्देशन दिदै हिँड्ने, कामको रिपोर्ट बुझ्ने र बाँकी समय नेताकोमा धाएर गफ लडाउने भन्ने प्रचलन छ यहाँ । तर म त्यस्तो हाकिम हैन
म हुर्किएर यत्रो जान्नेबुझ्ने भएँ, तर अहिलेसम्म यति ठूलो पदमा बसेको मान्छे जनताको कामका लागि कार्यालय समयमा यसरी लखरलखर पैदलयात्रा हिँडेको देखेको थिइनँ । विद्युत् प्राधिकरणलाई मालामाल भएको संस्थाको रूपमा बुझिन्छ र बुझिन्थ्यो । मन्त्रीहरू समेत चढ्न रहर गर्ने यो प्राधिकरणको गाडीहरू निकै महंगा हुन्छन् । त्यही संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान भने पैदलयात्रामा जनताको काममा निस्किएका थिए । उनका साथमा चारजना जति कर्मचारीहरू पनि थिए । ती कर्मचारीहरूले ठूलाठूला झोला बोकेका थिए ।
यो देशमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष आमा समूहको बैठकमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्न जाँदा स्कोर्पियो गाडी भाडामा लिएर जान्छन् । यहाँ मालपोतका तेस्रो तहका हाकिम साबहरू मन्दिरमा पूजा गर्न अनि खसीको मासु किन्न अफिसको सरकारी गाडी लिएर जान्छन् । यहाँ नगरपालिकाका अधिकृतहरू सरकारी गाडीमा च्याङ्ग्रा चढाएर ससुराली जान्छन् । तर कुलमानको पैदलयात्राको प्रयोग हेर्नलायक थियो ।
तपार्इंहरू आफैं अनुमान गर्नुहोस्, काठमाडौं जस्तो भीडभाड हुने ठाउँमा पब्लिक फिगर अनि जनताको मनमा बसेका कुलमान किन पैदलयात्रा गरेर बिजुलीका खाँबो र तारबारहरू नियालिरहेका होलान् ? एउटा सहजै लगाउन सकिने अनुमान हो – दीपावली आउँदैथियो । दीपावलीमा देशैभरि झिलिमिली हुन्छ । झिलिमिली बिजुलीबाट मात्र सम्भव छ । अब त बिजुली भनेको नै कुलमान र कुलमान भनेको नै बिजुली जस्तो भइसकेको छ ।
कुलमान र उनको कर्मचारीको टीम निकै व्यस्त थियो । तर पनि मैले कुलमानलाई दोबाटोमा दुईवटा प्रश्न गर्न भ्याएँ । र उनले तीे प्रश्नको उत्तर निकै सटीक ढंगबाट दिन चाहे किनभने उनको मान्यता थियो, जबसम्म बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सकिन्न र त्यो पर्फर्मेन्स जनताको लेभलबाट फील हुँदैन तबसम्म जति अन्तर्वार्ता अनि मिडियाबाजी गरेपनि हुनेवाला केही छैन । त्यसैले मैले सोधेका दुई प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने लाग्छ ।
पहिलो प्रश्न : तपाईं पैदलयात्रा गरेर हिँडिरहनुभएको छ, चर्को गर्मीमा के खान हिँड्नुभएको, गाडी छैनन् र ?
कुलमानको जवाफ : गाडीहरू जति पनि छन् । ती गाडीहरूलाई पनि तिहारको बिदा दिऊँ भनेर थन्क्याइएको छ । पक्कै पनि हाकिमहरू निर्देशन दिदै हिँड्ने, कामको रिपोर्ट बुझ्ने र बाँकी समय नेताकोमा धाएर गफ लडाउने भन्ने प्रचलन छ यहाँ । तर म त्यस्तो हाकिम हैन । निर्देशन दिएर, कर्मचारी थर्काएर, कागजको रिपोर्ट हेरेर हाकिमको दायित्व पूरा हुँदैन । आफू नै फील्डमा खट्यो भने कर्मचारीहरू पनि फील्डमा खट्छन् । आफू नै सुत्यो भने उनीहरू पनि सुत्छन् ।
यसपालिको दीपावलीको समयमा जनतालाई अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनेर कुलमान घिसिङ काठमाडौंको स्युचाटारस्थिति मास्टर स्टेसनमा पुगे । पुगेर कर्मचारीहरूलाई केवल निर्देशन दिएर फर्केनन् । भारप्रेषण केन्द्रको मास्टर स्टेसनको जिम्मेवारी आफैं लिए
त्यसैले म के चाहन्छु भने देशैभरि लोडसेडिङको अन्त्य भएको त छ तर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुछ । त्यो भनेको के भने अत्यधिक खपत हुने समयमा पनि जनतालाई बिजुलीको कुनै अभाव नहोस् । तपार्इंलाई थाहा नै छ, दीपावली तिहार आउँदैछ । देशैभरि झिलिमिली हुनेवाला छ । हाम्रा लागि यो समय चुनौतीको समय पनि हो । र हाम्रा लागि यो समय गरेर देखाउने अवसर पनि हो । यसलाई अवसरको रूपमा लिएको छु । र ढुक्क भए हुन्छ, दीपावलीमा कहीँकतै अँध्यारो हुनेछैन ।
दोस्रो र अन्तिम प्रश्न : तपाईं नेपालको रोलमोडल हो, तपाईंजस्ता अझै दर्जन जति मान्छेहरू भए भने देश बन्छ भन्छन् नि ?
कुलमानको जवाफ : म कुनै रोलमोडल हैन । म सामान्य मान्छे हो । तर म जब–ओरिएन्टेड मान्छे हो । काम गरेर देखाउने हो । जनताले काम हेरिसकेका छन् । त्यो अनुभूत पनि गरिसकेका छन् । बीचमा मलाई बदनाम गर्ने, काम गर्न मुश्किल बनाउने प्रयासहरू नभएका पनि हैनन् । कतिपय अवस्थामा त मिडियाका साथीहरूले नै मेरो खिल्ली उडाए । ‘कुलमान गयो, खोला सुक्यो’ पनि भनेछन् ठूलै पत्रकारले । त्यो मैले सुनेको कुरा भयो । ‘भारतको बिजुली किनेर हिरो भएको छ’ भन्नेहरू पनि निस्के । अझै पनि नानाथरी आरोप लगाउनेहरू छन् । तिनको मुख थुन्न त सकिन्न ।
काम गरेर देखाउने हो । मैले गरेको के मात्र हो भने यहाँ बिजुलीको ठूलो चुहावट थियो । जनताको बिजुली उद्योगीलाई मात्र बेचिएको थियो । तर त्यो किन गरिएको थियो अहिले भन्न चाहन्नँ । जनतालाई थाहा भइसकेकको कुरा भयो यो त । यसकारण चुहावट थियो र यसका लागि प्राधिकरणकै हाकिमसाबहरूको हात थियो । अर्को कुरा, बिजुली चोरी भइरहेको थियो । मिटर हेर्न र पैसा उठाउन जानेहरूलाई यो कुरा थाहा भएर पनि कार्यलयमा जानकारी गराउँदैनथे । बरू तिनीहरूले बिजुली कसरी चोरी गर्ने भनेर सिकाउँथे । र गुण्डाले जस्तो हप्ता असुल्थे । ती चोर कार्मचारीहरूलाई हामीले निलम्बन गर्‍याैं बर्खास्त गर्‍याैं ।
झिलिमिली, झिलिमिली केको झिलिमिली ? कुलमान दाइको झिलिमिली
यसपालिको दीपावलीको समयमा जनतालाई अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भनेर कुलमान घिसिङ काठमाडौंको स्युचाटारस्थिति मास्टर स्टेसनमा पुगे । पुगेर कर्मचारीहरूलाई केवल निर्देशन दिएर फर्केनन् । भारप्रेषण केन्द्रको मास्टर स्टेसनको जिम्मेवारी आफैं लिए । कतै गडबड नहोस् भनेर इन्जिनीयरहरूलाई स्ट्यान्डबाई राखे किनभने शुरूका दिनहरूमा कुलमानलाई मुसाहरूले हैरान बनाएका थिए । ती कस्ता खतरनाक मुसा भने नि, बिजुलीका तारै काटिदिने, मशिन नै बिगारिदिने ।
लक्ष्मीपूजाको समय देशभरि नै विद्युतको अत्यधिक खपत हुने भएकाले यो समय बत्ती डाउन नहोस् भनेर कुलमान रातभरि नै त्यहीँ बसे । लक्ष्मीपूजाको दिन देशभर साँझ बत्ती नकाट्ने संकल्प थियो उनको । र त्यो संकल्प उनले पूरा पनि गरे । त्यस समयमा सिस्टम सञ्चालन, माग र आपूर्तिको अवस्थालाई उनी आफैंले कन्ट्रोल गरे । हिजोका दिनहरूमा यस्तो कहाँ थियो र ? पत्रिकामा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरिदियो, रेडियोमा फुकिदियो अनि सुत्यो ।
झिलिमिली, झिलिमिली, केको झिलिमिली ?
यसपालिको दीपावली अन्य वर्षको भन्दा केही फरक देखियो । यसको टिप्पणी अनेकौं कोणबाट मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट पनि आइसकेका छन् । घरघरमा जनताले अनुभूति पनि गरिसकेका छन् । यसको अर्थ के हुन्छ भने सही नेतृत्व पायो भने चीजहरूले फड्को मार्न बेर मान्दैन । अँध्यारोबाट उज्यालोको युग जसरी हामीबीचमा छायो, त्यो नै हाम्रा लागि दीपावली थियो । त्यसैले त बनेपाको साँगाचोकमा यस्तो भैली गीत सुनियो :
केको झिलिमिली ?
कुलमान दाइको झिलिमिली ।
मनै रमायो, यो तनै रमायो
चारैतिर दीपावली छायो
झिलीमिली नै झिलिमिली ।
अँध्यारो बाटो थिएन, चिप्लो बाटो नि थिएन
कुलमान दाइको झिलिमिली
रोटी र दक्षिणा निकालिदेऊ आमा
भयो हामीलाई अबेर,
हेर्नुस्् त्यो पल्लो गाउँमा
झिलिमिली नै झिलिमिली ।